Fandaharanasa Afafi-Sud: tohanana ny mpamokatra any Atsimo | NewsMada
Manohana ny tantsaha mpamokatra any atsimon’ny Nosy ny Vondrona eoropeanina. Tanjona ny hanatsarana ny fambolena ny fiompiana ary ny jono.
Manodidina ny 250.000 ny tantsaha, mpamboly sy mpanjono, mahazo ny tohana amin’ny fandaharanasa Afafi-Sud, any amin’ny faritra Androy, Anosy ary Atsimo Andrefana. Mifantoka amin’ny fanatsarana ny fomba famokarana sy ny fiompiana ny tetikasa mba hananana sakafo ampy, hampihenana ny fahantrana ary ahafahana miatrika ny fiantraikan’ny fiovan’ny toetr’andro.
Iarahana miasa amin’ny Vondrona eoropeanina (UE) ny Afafi- Sud, ao anatin’ny Fandaharanasa tondromarika nasionaly na PIN (Programme indicatif national), ao anatin’ny Tahirimbola eoropeanina ho an’ny fampandrosoana (11 è Fed). Mandrindra azy ny Birao tantsoroka ao amin’ny fiaraha-miasa any ivelany (BACE).
Nisy atrikasa, ny 11 septambra teo tany Taolagnaro, nampahafantarina ny vokatry ny fanadihadiana isan-tsehatra, ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono any Androy, Anosy ary Atsimo Andrefana. Fantatra fa ilaina ny hametrahana rafitra iray ho fanangonam-baovao matanjaka hahazoana tarehimarika sy antontanisa azo antoka ka azo ampiasaina, araka izay betsaka.
Nilaza ny mpandrindra ny fandaharanasa Afafi-Sud, Rabesalama Miandra fa “ahafahan’ny mpanapa-kevitra sy ny solontenam-panjakana mandray fanapahan-kevitra matotra ny fananana antontanisa mazava, hampandrosoana ny sehatry ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono”.
Hapetraka ny vovonana hanamafisana ny fahaiza-manaon’ny isan-tsehatra aorian’ity atrikasa ity. Homena azy ireo ny antontam-baovao sy ny fitaovana ilainy hanatanterahany ny andraikiny avy. Nambaran’ny teknisiana amin’ny rafitra fanangonam-baovao ara-jeografia (Sig), Andriambahiny Jean Dominique, fa “homen-danja ny tena filan’ny mpahazo tombontsoa, izay maro tamin’izy ireo no nitaky izany”.